Nhau - Coronavirus conundrum: Midziyo ichiri kushomeka
Coronavirus conundrum: Midziyo ichiri kushomeka
"Kubvira mukota yechitatu, taona kukwira kusingaenzanisike kwekudiwa kwekutakurwa kwemidziyo," Nils Haupt wekambani yekutakura zvinhu Hapag Lloyd akaudza DW. Ndicho chiitiko chisingatarisirwe asi chinogutsa zvichitevera makore gumi nemaviri ebhizimusi kudonha uye kutanga kwedenda.
Haupt akati kutumira kwakarohwa zvakaomarara muna Ndira naFebruary 2020 sechigadzirwa cheChinese chakamira, uye ndizvo zvakaitawo kutengesera kuAsia. "Asi zvinhu zvakazoshanduka, uye kudiwa kwakatiza muUS, Europe neSouth America," akarangarira. "Chigadzirwa cheChinese chakatangwazve, asi pakanga pasina zvakawanda zvekufambisa - indasitiri yedu yaifunga kuti icharamba yakadaro kwevhiki kana kunyange mwedzi."
Lockdown inokonzera boom
Zvinhu zvakatendeuka zvekare muna Nyamavhuvhu apo kudiwa kwekufambisa kwemidziyo kwakasimudzwa zvakanyanya, zvichipfuura kugona kwekugona. Iyi boom yakonzerwawo nekukiya, kuona vanhu vazhinji vachishanda kubva kumba uye vachishandisa zvishoma pakufamba kana masevhisi. Nekuda kweizvozvo, vazhinji vakaisa mari mumidziyo mitsva, zvemagetsi zvevatengi, zvekushandisa zvemitambo nemabhasikoro pane kuchengetedza mari yavo. Uye zvakare, mabhizimusi makuru nevatengesi vanga vachiunganidza matura avo zvakare.
Fleets haigone kukura nekukurumidza zvakakwana kuti irambe ichienderana nekuwedzera kudiwa kwekutakurirwa kwemidziyo. "Varidzi vengarava vazhinji vabvisa ngarava dzekare mumakore mashoma apfuura," Burkhard Lemper anobva kuInstitute for Shipping Economics and Logistics (ISL) akaudza DW. Akawedzera kuti varidzi vengarava vaive vozeza kuodha ngarava nyowani, uye mushure mekutanga kwedambudziko rekonaona mamwe mirairo yakamiswa.
"Chiri kunyanya kutinetsa pari zvino ndechekuti hatina zvombo zvekuchengetedza pamusika," akadaro Nils Haupt waHapag Lloyd, achiwedzera kuti hazviite izvozvi kubatisa ngarava. "Ngarava dzese dzinokwanisa kutakura midziyo uye dzisiri mumawadhi ekugadzirisa zvinhu dziri kushandiswa, uye hapana midziyo yekuchengetedza," Ralf Nagel anobva kuGerman Shipowners 'Association (VDR) akasimbisa kuona-a-vis DW.
Kunonoka kwekufambisa kunowedzera kushomeka
Kushaikwa kwezvikepe haisiyo yega nyaya. Iko kudiwa kukuru uye denda zvakakonzera kukanganisika kukuru pazviteshi uye panguva yekutakura-mukati. MuLos Angeles semuenzaniso, ngarava dzinofanira kumirira kwemazuva gumi vasati vabvumidzwa kupinda pachiteshi. Kushaikwa kwevashandi nekuda kwezviyero zvekuvharira uye mashizha anorwara anowedzera mamiriro acho ezvinhu, nedenda racho dzimwe nguva richipatsanura vashandi vese pakuvharirwa.
"Kuchine vamwe vafambisi vengarava mazana mana ezviuru kunze uko vasingakwanise kutsiviwa maringe nenguva," akadaro Mutungamiri weVDR Alfred Hartmann.
Midziyo isina chinhu chinhu chaicho bhodhoro sezvo ivo vanowanzove vari mugungwa kureba kupfuura zvakajairwa nekuda kwekunonoka kuzviteshi, pamigero uye panguva yekufambisa mukati. MunaNdira wega, ngarava dzeHapag Lloyd dzakanonoka paawa 170 paavhareji munzira dzaiwanzowanikwa kuFar East. Pamigwagwa yekupfuura-Pacific, kunonoka kwakawedzerwa kusvika kumaawa makumi maviri nemaviri paavhareji.
Zvakare, midziyo inogara kugara nevatengi kwenguva yakareba kusvikira yagadziriswa. “Gore rakapera uye kutanga kwegore rino, takatenga makontena matsva mazana matatu ezviuru, asi kunyangwe iwo anga asingakwani, akadaro Haupt. Kuti atenge zvimwe zvakange zvisina imwe sarudzo, akawedzera, nekuti vagadziri vaitove vachishanda zvakakwana uye mitengo yakanga yakwira.
Yakakwira nhumbi mitengo, yakakwira purofiti
Kudiwa zvakanyanya kwakakonzera kukwira kwemitero yezvinhu, kuisa avo vane zvibvumirano zvenguva refu mukana - zvibvumirano zvakarohwa pamberi pekutanga. Asi chero munhu anoda huwandu hwekufambisa panguva pfupi anozomanikidzwa kuburitsa mari zhinji uye anogona kuzvifunga rombo rakanaka kana zvinhu zvavo zvikatumirwa zvachose. "Parizvino, zvave pedyo nekusagone kunyorera huwandu hwekutakura nekukurumidza," Haupt akasimbisa.
Sekureva kwaHaupt, zviyero zvemitoro izvozvi zvave kusvika kukana kana kukwira kupfuura zvazvaive gore rapfuura, kunyanya zvine chekufambisa kubva kuChina. Avhareji yemitengo yemitoro paHapag Lloyd yakakwira ne4% mu2019, akadaro Haupt.
Sekambani hombe yekutakura zvinhu yekuGerman, Hapag Lloyd aive negore rakanaka mugore ra2020.Gore rino, kambani inotarisira kumwe kusvetuka mukuita purofiti. Inogona kupedzisa kota yekutanga nemari yaunowana pamberi pechimbadzo uye mutero (Ebit) inosvika € 1.25 bhiriyoni ($ 1,25 bhiriyoni), zvichienzaniswa ne € 160 mamirioni chete panguva imwechete gore rapfuura.
Kambani hombe yekutakura midziyo yepasi rose, Maersk, yakagadzirisa yakagadziriswa purofiti yekushandisa ye $ 2.71 bhiriyoni mukota yechina yegore rapfuura. Iyo Danish femu inotarisirawo kuti mibairo iwedzere kuwedzera mu2021.
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Mat Puzzle, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Rakajeka, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Furo Rakajeka, Zvese Zvigadzirwa